Home Wararka Is horistaag caawa lagu sameeyay Shaqaalaha Xafiiska RW Rooble
Is horistaag caawa lagu sameeyay Shaqaalaha Xafiiska RW Rooble
Ciidamada NISA oo caawa is horistaag ku sameeyay shaqaalaha Xafiiska RW Rooble. Ciidamada ku sugan wijiga hore ee madaxtooyda iyo kuwa ku sugan Sayidka ayaa gabi ahaanba diiday in ay aqoonsadaan ama Aqbalaan waraaqada aqoonsiga ee Xafiiska RW Rooble.
Mid kamida Shaqaalaha Xafiiska RW Rooble ayaa u sheegay MOL in Ciidanka NISA ee ku sugan sayidka ay dib u celiyeen Shaqaalaha Xafiiska RW Rooble, iyaga oo diiday in ay aqabalaan warqada aqonsiga RW Rooble.
Talaabada ay qaadeen ciidanka NISA ayaa qalqal galisay Shaqaalaha Xafiiska RW Rooble. Su’aasha u baahan isweydiinta ayaa ah Rooble ma ceyrin doonaa Fahad inta aan dhibka sii badan!